‘रुख’को छहारीमा राजनीतिमा होमिएका रामेश्वर :: विनोद नेपाल – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ आश्विन २०७७, सोमबार १८:२९ English
‘रुख’को छहारीमा राजनीतिमा होमिएका रामेश्वर :: विनोद नेपाल
मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत रहँदा विभागीय मन्त्रीको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ट भएपछि एकाएक राजीनामा दिएर चर्चामा आएका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । इमानदार र कुशल प्रशासकको रुपमा परिचित उनको इमानदारीलाई उदाहरणीय मान्ने गरिएको छ । स्मरणीय छ दबाबमा नीति र कानून विपरीत काम गर्न नचाहने उनी अर्थसचिव पदमा रहँदा २०६७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीसँगको मतभेदका कारण पदबाट राजीनामा दिई भविष्यमा राज्यकोषबाट सुविधा लिने कुनै पनि पदमा नियुक्त नहुने बाचा सहित सरकारी सेवाबाट बाहिरिएका थिए ।
राजनीति प्रवेश गर्दा उनले मुलुककै पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टीलाई आफ्नो पार्टीको रुपमा रोजेका छन् । कुशल प्रशासकको रुपमा नाम कमाएका खनाल राजनीतिमा प्रवेश गरेको कुराले धेरैलाई आशावादी बनएको छ । उनले राजनीतिमा रहेका खराबी पहिल्याइ त्यसमा शुद्धीकरणका लागि प्रयास गर्नेछन् र कांग्रेसको मात्रै होइन मुलुकको राजनीतिकै शुद्धीकरणमा योगदान गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । तर यो सोचेजति सजिलो भने छैन । किनकि हाम्रो राजनीति गैरजिम्मेवार छ , वद्नाम छ र त्यसभन्दा बढ्ता यो गन्हाएको छ । आम जनताको विश्वास गुमाउँदैछ । धोखाधडी, अबसरवाद र झुटमुटको अर्को नाम नै राजनीति हो भन्ने स्थापित भइसकेको अवस्था छ ।
खनालको पार्टी प्रवेश विभिन्न अनुमान र आशंका वीच भएको हो । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा उनका आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गरेकाले उनलाई एमाओवादी निकट ठान्नेहरूको पनि कमी थिएन तर उनी कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि उनको आदर्श र सिद्धान्त स्पष्ट भएको छ । अब पूर्व प्रशासकको उनको परिचय राजनीतिसँग जोडिन पुगेको छ । प्रशासक हुनु र राजनीति गर्नु दुई अत्यन्त भिन्न कुरा हुन् । प्रशासकले अगाडि पछाडी, विधि, पद्धती र परम्परा सबैतिर दिमाग पु¥याउनु र ख्याल राख्नु पर्छ भने राजनीतिकर्मीले तात्कालीक परिस्थितिलाई मात्र हेर्दा पनि चल्छ, चलेकै छ । यसमा खनाल कसरी प्रस्तुत हुन्छन् देख्न पाइने नै छ ।
निश्चय नै खनाल बद्नाम वा अवसरवादी प्रशासक होइनन् । कर्मचारी वा राष्ट्रसेवकको रुपमा कार्यरत रहँदा प्रशंसित एवं निष्कलंक रहेका व्यक्ति हुन् । उनी कुनै काण्डमा मुछिएनन् । आदर्श पढाउने प्रयास गरेनन् र आफू सिधासादा र आफ्नो कामप्रति डटेर लाग्ने छवि बनाउन सफल भए । एक उदाहरणीय प्रशासकका रुपमा कार्यरत रहँदारहँदै अनपेक्षित रुपमा राजीनामा दिई पदमुक्त भएका उनले आफूलाई अब कांग्रेस भित्रको किचलो, कलह, विभाजनमा कसरी टिकाउन सक्ने हुन् त्यो पनि हेर्नु बाँकी नै छ ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा विचार, सिद्धान्त, मान्यता र आदर्श भन्दा अवसर हेरेर राजनीति गरिन्छ र राजनीति त्यसैगरी चल्छ । राजनीतिमा अवसरवाद हावी हुन्छ । चाहेर वा नचाहेर पनि बेलाबखत विवादास्पद कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि एउटा दलसँग आबद्ध भएपछि त्यसैको हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैको नीति अनुरुप चल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि कांग्रेसको स्थिति र अवस्था अत्यन्त टिठलाग्दो छ । अहिलेसम्म कांग्रेस अघिल्लो पुस्ताको नाम भजाएर खाँदैछ, अब त्यसरी टिक्न सकिने अवस्था छैन । दोस्रो पुस्ता अक्षम, चरम अवसरवादी र गैरजिम्मेवार देखिएको छ । त्यस्तो स्थितिमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका खनाल सामु थुप्रै चुनौती छन् । यस्तो परिवेशमा प्रशासकको रुपमा निष्कलंक र स्वच्छ छवि बनाएका खनाल कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? प्रशासकको रुपमा ‘कुशल’को पगरी गुथेका उनले हालसम्मको छवि कायम राख्दै राजनीतिको व्यवस्थापनमा पनि आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने चुनौतीको कसरी सामना गर्ने हुन् हेर्न बाँकी नै छ । तर कांग्रेसलाई सुधार गर्नु छ, राजनीतिको फोहर सफा गर्न खनालहरूले भूमिका खेल्नु छ । कांग्रेस भित्र गुट उपगुट छन् । त्यसको अन्त्य गर्न लागिपर्नु छ । कांग्रेसको सिद्धान्त, विचार, आदर्श र इतिहासबाट विचलित भएको छ, त्यसलाई गम्भीरतासाथ लिई सुस्ताएको, बाटो बिराएको, अल्मलिएको र जोश जागर गुमाएको दिशाहीन, गन्तव्यहीन एवं किंकर्तव्यविमुढ कांग्रेसलाई पुनः दरिलो र गौरवपूर्ण पार्टीको रुपमा स्थापित गर्न निरन्तर लाग्नुपर्ने छ ।
खनालको कांग्रेस प्रवेशले कांग्रेसीमा ठूलो उत्साह छाएको छ । पार्टी प्रवेशको क्रममा उनले कांग्रेससँग आफ्नो विकासवादी सोच मिलेका कारण कांग्रेस प्रवेश गरेको जनाएका छन् । खुला र उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती कांग्रेस र त्यसैका अनुयायी खनालको नेपाली कांग्रेससँग सोच मिल्नु आश्चर्य होइन । उनले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा लैजान भरमग्दुर कोशीस गर्ने बताएका छन् । त्यो पनि स्वाभाविक नै हो । पार्टी प्रवेशका अवसरमा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले खनालको आर्थिक नीति प्रतिको दक्षता, सीप र योग्यतालाई कांग्रेसले उपयोग गर्ने र उनलाई उपयुक्त मर्यादामा राख्ने बताएका छन् । तर एकजना व्यक्तिको पार्टी प्रवेशले एउटा ठूलो राजनीतिक पार्टीको समग्र कार्यशैलीमा तात्वीक असर नपार्ने भएकाले धेरै आशावादी हुनु भने जरुरी छैन । हेरौं खनाल आफै फोहरमा हराउँछन् वा कांग्रेसको शुद्धीकरण गर्न सफल हुन्छन् ।
राजनीति फोहरी खेल हो भन्ने खनालले राम्ररी बुझेका छन् । कुन कुन कालखण्डमा कतिजना मन्त्रीसँग काम गरे र त्यसबाट के कस्ता अनुभव बटुले त्यसको हेक्का अवश्य गर्नेछन् । मन्त्री अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वको चाहना र अपेक्षा के हुन्छ र प्रशासकले के सम्म गर्नु हुन्छ भन्ने उनले राम्ररी बुझेका छन् । अब राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनीपनि त्यहीबाटो हिंड्ने हुन् वा राजनीतिमा रहेको विकृतिको अन्त्य गर्न सकारात्मक सोचका आफूजस्तै ऊर्जाशील र युवा नेताहरूको नेतृत्व गदै हालसम्मको स्वच्छ र सकारात्मक सोचको छवि जोगाउन प्रयत्न गर्ने हुन् हेर्नु छ । तर भुलेर पनि आफै गन्हाउने र त्यही आहालमा डुब्ने होइन राजनीतिमा भएका फोहर मैलाको सफाई गर्नुपर्छ । वद्नाम राजनीतिलाई सकारात्मक र जिम्मेवार बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेनन् भने उनी कांग्रेस वा कुनै दलमा प्रवेश गरेपनि त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन बरु उनी पनि एउटा अर्को अवसरवादी र अवसरको खोजीमा दल प्रवेश गर्नेे व्यक्तिकै रुपमा चिनिने अवस्था आउने छ । सुविधाभोगी, महत्वाकांक्षी र पदलोलुप प्रवृत्तिका नभएका तथा सामान्य परिवारमा हुर्केर निजामती सेवाको सामान्य जागिरेबाट उच्च प्रशासनिक तहमा पुगेका उनको अनुभवले योजना, नीति र कार्यक्रम बनाउन र उनले भनेझै मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा लैजान सफलता मिलोस् र खनालको प्रवेशले कांग्रेसका युवा नेता र नेतृत्वमा नयाँ ऊर्जा प्राप्त भई कांग्रेसको शुद्धीकरणमा बल मिलोस् । रामेश्वरलाई राजनीतिमा पनि सफलता मिलोस् यही कामना गरौँ ।
११ भाद्र २०७०, मंगलवार १९:३० मा प्रकाशित